PMPF oo howl-galo ku qabtay dhalinyaro diyaarinayey weeraro Burcad-badeednimo (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 10, 2013 12:40 g 0
Boosaaso, December 10, 2013 – Ciidamada badda Puntland ee PMPF ayaa qabtay saddex wiil oo dhalinyaro kuna eedaysan Burcad-badeednimo, kadib howl-gal ay ka sameeyeen xalay deegaanka Mareero ee gobolka Bari.
PMPF waxay sheegeen in ay baxsadeen afar kale oo lagu raad joogo.
Gen. Cabdirisaaq Diiriye Faarax oo ah taliyaha ciidamada badda ee Puntland, wuxuu saxaafada uga war-bixiyey howl-galka laga sameeyey deegaanka Mareero ee duleedka Boosaaso laguna qabtay rag eedaysan.
?Saddex ayaan qabannay afarna waan ku raad joognaa, waxay donayeen in ay badda galaan si ay weeraro u fuliyaan, xog aan helnay baa keentay in aan soo qabqabano.? Ayuu yiri Gen. Diiriye oo u mahadceliyey ciidamada PMPF.
Talisku wuxuu sheegay in ay ku raad joogaan ragga kale ee aan la soo qaban balse qayb ka ahaa howl-galka Burcad-badeednimo ee laga abaabulayey deegaanka Mareero.
?Waxaan degniin u dirayaa dhalinta yar yar ee loo dirayo badda, ee lacagta la siinayo si ay burcad-badeednimo u sameeyaan.? Gen. Diiriye ayaa dhalinta ugu baaqay in ay shaqo tagaan oo iska dhaafaan jiri-nimada
Burcad-badeeda soomaalida ayaa bilaabay inay fuliyaan weeraro dhowr ah oo ay ka geysteen xeebaha gobolka bilihii tegay, in kastoo ay difiictay awoodii kooxda sida ay sheegeen hay?addaha iyo urrurada ku shuqulka leh arrimaha baddaha iyo la socodka xaaladaha Burcad-badeednimo.
Dhegeyso: – Cabdiraxman Axmed oo daljir ka tirsan ayaa diyaariyey war-bixin arrintaas khusaysa
Baahin: Salaasa, 10 Dec 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Xaliimo Sacdiya Cabdilaahi ~ Daljir ~ Garowe